ब्लू-जुंगफुफन, ब्ला जंगफुफन, टापु "ब्लू युडेन" - काल्मार
युरोप स्वीडेन स्क्विड
जल क्षेत्र: बाल्टिक समुद्र
स्थान: स्वीडेन, क्षेत्र ले Len Kalmar
क्षेत्र: 0,66 sq.m.
उच्चतम मुद्दा: 86 मि
स्वीडेनका दक्षिणी-पश्चिममा, कलमर्सन्ड स्ट्रेटमा, त्यहाँ एक सानो तर धेरै रोचक द्वीप हो जुन ब्ल-जुङफ्रन भनिन्छ। यो रहस्यवादमा लिपटेको छ, किनकि यो यात्रीहरूसँग धेरै लोकप्रिय छ।
द्वीपको ब्लू-जुङ्ग्रेफुनको इतिहास
पुरातनवादी कार्ल लिनिअस द्वारा 1741 मा आर्चिपिलियो भ्रमण गरिसकेपछि, त्यो स्थानीयहरु संग सम्बन्धित छ जसमा चुरोट को बुना भयो। नाविकहरूले ब्लिच-जुफ्रेफोनलाई छेउमा राखे, दुष्ट आत्माहरूको डरले। उनको पहिलो भ्रमणमा कार्ल लिनीले पनि द्वीपलाई "डरलाग्दो" भनिन्। यसको बावजूद, 1899 मा स्विडिश लेखक वार्नर व्यान हेडेनस्टमले ओल्गा वेबेबर संग विवाह गरे।
हालको पुरातात्विक अनुसन्धानको नतिजाको रूपमा, यो पत्ता लगाउन सम्भव थियो कि मानिसहरु को रहन र सक्रिय संस्कृत क्रियाकलाप सातौं सहस्राब्दी ई.पू. सम्म आर्चिपेलगो मिति मा।
1926 मा, ब्ल-जुङ्गफ्रुन्टको टापु राष्ट्रिय राष्ट्रिय पार्कको रूपमा नामित गरिएको थियो। हाल, पार्कको क्षेत्र 198 हेक्टेयर हो, जसको लगभग तीन चौथाई (132 हेक्टेयर) पानीको आधारमा हुन्छ।
भूगोल र जैव-जुंगफुन जैव विविधता
यो सानो द्वीपपूर्वाको राहतले बोल्डर र नजदिएको चट्टानले लाल रंग ग्रेनाइटलाई चित्रण गर्दछ। यस तथ्यको बावजुद ब्लक-जंगङफुणको व्यासले 1 किलोमिटरसम्म पुग्न सक्छ, यसको उत्तरी र दक्षिणी भागहरू एक-अर्काबाट विचलित हुन्छन्। उत्तरमा तपाईं ठूलो मात्रामा चट्टानहरू विषाक्तता र गहिराइको छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ। दक्षिणी अस्तित्व तल स्थित छ र परिष्कृत जंगल संग कवर गरिएको छ।
Blo-Jungfrun द्वीप को फ्लोरा मुख्य रूप देखि lichens, 200 प्रजातिहरु मा प्रतिनिधित्व गर्दछ। फ्युटु पनि भिन्नतामा भिन्न छैन र समावेश गर्दछ:
Blo-Jungfrun को दक्षिणी-पश्चिममा स्टोन स्लिपिप्टिट भनिन्छ।
Blo-Jungfrun को द्वीपमा रुचिको स्थानहरू
दक्षिण स्वीडिश किंवदंतियों को अनुसार, यो आर्चिपिलago मा मान्छे कहिल्यै बाँचे। बीचमा, कार्ल लिनिअस, ब्ल-जुङ्ग्रेफुन द्वीपमा आइपुग्यो, रहस्यमय गुफाहरू र अज्ञात उत्पत्तिको एक पत्थरको खोजी। पत्थर गुफाहरूमा त्यहाँ मानिस बनाइएको वेदी र एक चरण हो जुन जादुई र धार्मिक अनुष्ठानहरू सञ्चालन गर्न ठाउँको रूपमा सेवा गर्न सक्छ।
आज आइतवार ब्ल-जुङ्गफुफोन द्वीपमा एक पर्यटक मार्ग हो जुन बिलबोर्डहरू र काठ बोर्डहरू छन्। यसको पछि, तपाइँ निम्न साइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ:
द्वीप को उच्चतम बिंदु;
पत्थर भूलभुलैया Rock Sliperiet।
भूलभुलैया संग, पत्थर देखि बाहिर राखिएको र दसौं मीटर सम्म फैलिएको छ, यो चुच्चोको बुनाको बारेमा पुरातन मान्यता हो। स्वीडेन मा मध्य युग मा अन्य यूरोपीय देशहरु को रूप मा, एक चुड़ैल को शिकार थियो। दक्षिण स्वीडेनका एउटै कथाकारहरूको अनुसार, ब्ल-जुङ्गफ्रफनमा भोज गर्ने एक दिन, करिब तीन महिलाहरू एकत्रित थिए, जो जादूगर र अपहरणको लागि क्रूर रिभलसहरूको अधीनमा थिए।
एक दिन टोली "गन्तव्य सत्य" बाट शोधकर्ताहरूको टोलीले असाधारण घटनालाई ठीक पार्न सकेन। तिनीहरूले ट्याप अस्थायी रोशनी र रहस्यमय आवाजहरू रेकर्ड गर्न सफल भए, जुन अज्ञात भाषा भाषामा बोलेका थिए। शोधकर्ताहरूले सन्देशहरूको अर्थ बुझ्न सकेनन्।
कसरी ब्ल-जुङ्गफुफुन जान्छ?
स्विडिश आर्चिपेलो स्वीडेन मुख्य भूमि स्वीडिशको दक्षिणी तट तथा ओल्यान्डको बीच बाल्टिक सागरको मध्यमा स्थित छ। स्टकहोमबाट, ब्लक-जुङफुफ टापु लगभग 245 किलोमिटरमा विभाजित हुन्छ, जुन पानीको ट्राफिकमार्फत सजिलो हुन्छ। पुरातन शहर को निकटतम ओस्करस्मानम, 20 किमी स्थित छ। यहाँ तपाईं एक नाव वा डुङ्गा भाडामा लिनुहुन्छ, जुन तपाईले ब्ल-जुङ्गफुफ गर्न सक्नुहुनेछ।
Åland द्वीप को द्वीप को किनारा देखि बुस्कसेल्क शहर को माध्यम ले पुगन सकिन्छ, जो कि 15 किमी दूर स्थित छ।
मेल्या सेलिमिओच बोलेवर्ड
ईथनोग्राफिक केन्द्र डित्रीविक
सेरेक नेशनल पार्क
पैलेस को स्टकले
पनीर को पोषण मूल्य
के गुलाबी कोट के गर्ने?
जाडोको लागि नाशपाती जाम
आफ्नो हातले भान्सामा टेबल
सामान्य पल्समा उच्च पल्स
यदि कुनै गर्भावस्था छैन भने तिनीहरू मासिक हुदैन किन?
कफीको लागि एलो
अचम्मको टाउकोमा तुरुन्तै राख्नु: गन्दाको कपालको लागि केशैली
पुन: प्राप्ति गर्ने तरिका: चार्ली शेनले औषधीको शरीरलाई पूर्ण रूपमा सफा गरेको छ
खुल्ला जमीनमा हिब्रू पेन्सिलेशन हाइबिर्नेटिंग
मानिस-वृश्चिकलाई कसरी फर्काउने?
बिल्लीको मुखबाट गंध - कारणहरू
ब्राडली कूपरले गर्भवती इरेन शेकको लागि एक गोपनीय बच्चाको बौछारलाई व्यवस्थित गर्यो
कालो अखरोट - उपयोगी गुणहरू
फैशन हैंडबैग 2014-2015
अक्सिस्जाइज - सास र वजन कम गर्नुहोस्
मोती देखि टलिपिप
घरमा बिरुवाहरूको ब्याकलाइटिङ